Baarlamaanka Puntland oo maanta meel-mariyey qorshe lagu kordhinayo qiimaha lacagta dawladdu ay ku sarrifto canshuuraha dadweynaha. – Radio Daljir
Galkacyo, July 21 – Fadhigii golaha wakiillada Puntland oo toddobaaddadii ugu dambeeyey ka socday aqalka baarlamaanka ayaa maanta la horgeeyey qosrhe qiimo-kordhineed oo galaha xukuumaddu soo gudbiyeen kaasoo wax looga badalayey habka sarifaadda lacagaha dawladda qabato iyadoo xildhibaannadu ay ansixiyeen.
Qorshaan oo ay baarlamaanka horkeeneen golaha xukuumadda Puntland ayaa ahaa mid lagu dalbanayey in 2% lagu kordhiyo qiimaha dawladda ay ku baddalato lacagaha canshuuraha ah ee ay dadweynaha ka qaaddo kaasoo muddo badan la tilmaamayey in uu hooseeyo.
Dawladda ayaa markii ay qiimaysanayso lacagaha shillin Soomaaliga ah ee loogu geeyo canshuur ahaan ku dhufsata xagga qiimaha dollar-ka 280,000 oo shillin Soomaaliya kaasoo hadda golaha xukuumaddu ay soo gudbiyeen in laga dhigo 30,000.
Mudanayaasha oo dood-dheer ka yeeshay arrintaasi ayaa siweyn ugu kala aragti duwanaaday lacag kordhintaas iyadoo kuwa badan ay soo jeediyeen in dawladdu qorsheeda ay u marto waddooyin kale laakiinse aan la samayn lacag kordhin.
Cod la galiyey arrintaasi ayey is le’egkaadeen mudanayaasha diiday iyo kuwa ogalaaday iyadoo sida wararku tilmaamayaanna mar kale lagu celiyey codaynta kaddibna illaa 19 mudane oo ka mid ahaa 36 mudane oo fadhiyey kulanka maanta ay u codeeyeen meelmarinta lacag-kordhintaasi taasoo ansax ka dhigtay ogalaansha dalabkii dawladda.
Lacagtaan lagu kordhiyey sarifkii dawladdu ku qaban-jirtay lacagaha shillin Soomaaliga ayaa lagu tilmaamay in ay dib u gali-doonta daryaalka ciidamada dawladda Puntnland sida ku cad dalabka xukuumadda ee ah kordhinta sarifka lacagta canshuuraha lagu baddalo.